Kedu ihe kpatara na m enweghị ike imeghe ofu DBF faịlụ? - DataNumen
E nwere ụzọ atọ maka ọnọdụ a, dị ka ndị a:
your DBF a na-ekepụta faịlụ site na otu ngwa, mana ịchọrọ imeghe faịlụ edozi na ngwa ọzọ, nke na-adabaghị na nke mbụ ma na-akpata nsogbu. Azịza ya bụ ịtọ ezi mbipute ke ngwakọta igbe n'akụkụ “Họrọ DBF to be rụzie ”edit box dị ka nke abụọ ngwa wee start rụkwaa faịlụ ahụ ọzọ. Ọmụmaatụ, gị DBF file Clipper mebere ma ichoro imeghe ya na dBase III, Ikwesiri idobe “Version” ka “dBase III” wee mezie faili ahu ozo
Gị ofu DBF faịlụ buru ibu karịa 2GB, ọkwa amara ama nke DBF faịlị, yabụ most DBF dakọtara ngwa apụghị imeghe faịlụ gị. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji Visual FoxPro mepee faịlụ dị otú ahụ, ị ​​ga-enweta njehie "Ọ bụghị tebụl". Ihe ngwọta ya bụ iji mee ka “Gbasaa faịlụ mgbe ọ karịrị # ## MB” nhọrọ na taabụ “Nhọrọ” ma tọọ uru kwesịrị ekwesị, nke kwesịrị ịbụ ihe na-erughị 2GB, dịka ọmụmaatụ, 1800MB, dịka oke faịlụ kachasị, na wee mezie mbido gị DBF faịlụ ọzọ. Mgbe mmepụta ofu faịlụ bụ ibu karịa a ịgba, D.DBFR ga - ekepụta faịlụ ọhụụ ọhụrụ iji nabata data fọdụrụ nwetaghachi. Ma ọ bụrụ na nkewa faịlụ ruru ịgba ọzọ, a abụọ ọhụrụ gbawara n'etiti faịlụ ga-kere, na na.
Na ofu gị DBF faịlụ, enwere ihe karịrị 255 na tebụl. Ugbu a most DBF dakọtara ngwa anaghị akwado a table na ihe karịrị 255 ubi. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji Visual FoxPro mepee faịlụ dị otú ahụ, ị ​​ga-enweta njehie "Ọ bụghị tebụl". Azịza ya bụ iji mee ka “Split table mgbe enwere karịa ### ubi” nhọrọ na taabụ “Nhọrọ” ma tọọ uru kwesịrị ekwesị, dịka ọmụmaatụ, 255, dịka ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ahịa, wee mezie mbụ gị DBF faịlụ ọzọ. N'ihi ya, mgbe DDBFR na-achọpụta na enwere karịa 255 ubi na tebụl, ọ ga-emepụta okpokoro okpokoro ọhụrụ iji kwado ubi ndị fọdụrụ. Ma ọ bụrụ na ubi ndị fọdụrụ ka karịrị ubi 255, a ga-emepụta tebụl ọhụụ ọhụrụ, na ihe ndị ọzọ.
enweghị ike imeghe, edozi faịlụ